"Waan aamini la'ahay inaan gaari ku wado gudaha Sucuudiga" - BBC News Somali
"Waan aamini la'ahay inaan gaari ku wado gudaha Sucuudiga"
Image caption Roa Altaweli oo markii ugu horreysay gaariga ku waday gudaha Jeddah, Saudi Arabia
Kaddib markii laga qaaday xayiraadda haweenka wada gawaarida ee ku nool Sucuudiga ayaa haweenayda lagu magacaabo Roa Altaweli, oo ah umuliso ku nool magaalada Jiddah ay markii ugu horreysay shaqada ku tagtay gaarigeeda. Iyada ayaana ka sheekeynaysa.
Waxaan soo kacay ka hor xilligii aan kici jiray markii ugu horreysay ee aan maqlay in xayiraadda la qaaday .Aad ayaana u faraxsana oo waan seexan waayey .Waxaa ii suurta gashay inan shaqada gacantayda isku geeyo markii ugu horreysay.Waxaana aamini la'ahay inan gaari ku dhexwado gudaha Jiddah.
Sucuudiga ayaa ugu dambayntii xayiraadda ka qaaday haweenka gawaarida wada. Habeenkii oo dhan ayaan baraha bulshada ku jiray si aan u daawado sawirada iyo muuqaalada haweenka jidadka ku wado gaawarida daqiiqado un kaddib markii xayiraadda la qaaday.
Markii ugu horreysay waxan dareemay cabsi balse aabahay ayaa i wehliyey oo aan ka helay taageero badan.
Waxan horay usii maray xarunta booliska ,balse kama aan cabsanaynin inay i xiraan. Hadda waxan haysta ruqsad waxaana si sharci ah gaarigayga ugu wadayaa gudaha Sucuudiga.
Waxaan horay gaari ugu wadi jiray markiii aan jaamacadda ka dhiganayey dalka Bahrain oo aan ka helay ruqsad aan ku wado gawaarida tan iyo 2005-dii. Waxan sidoo kale helay ruqsado caalami ah oo aan isticmaali jiray marka aan fasaxa u joogo Dubai, Portugal iyo Mareykanka.
Aabahay iyo walalkay ayaa igu dhiira geliyey iyo walashay iga yar si aan u heli ruqsad oo aan gaarigayga u wado marka xayiraaddda la qaado.
Waxan ahay umuliso , oo aan ooga soo taqasusay Jaamacad ku taalla Ingiriiska. Yurub iyo wadamada kale ee hormaray aad ayey muhiim ooga tahay inay umulisooyinka ka xeystaan gawaarida maxaa yeelay waxay u baahanyihiin inay si joogta ah u booqdan isbitaalada.
Markii Sacuudiga laga ogolaaday inay haweenka ku dhali karaan guryahooda, arrintan ayaa haweenka ka caawinayso inay guryahooda ku dhalan iyagoo ay si fudud umuliso ku heli karo.Wadidda gawaarida ayaa haweenka caafimaadka ka caawinayso inay tagaan isbitaalada xilli walbo .
Markii aan tagay isbitaalka ku yaalla bariga Jeddah ee ah xarunta aan ka shaqeeyo ma jirin cid ila hadashay.
Weli ma'anan gaarin meeshii aan rabnay ,balse waxan dareensannay inay tani awood na siinayso. Waxay noo ahayd taariikh ,waxayna u muuqataa inay taariikh gooni ah u leedahay dumarka u dhashay Sacuudiga."